संविधान मृत्युको मुखमा उभिएको छ, तर त्यसलाई बचाउनुपर्दछ – मोहनविक्रम सिंह | रक्त न्युज
आजको सम्पूर्ण राजनीतिक स्थितिमाथि विचार गर्दा संविधान मृत्युको मुखमा उभिएको देखिन्छ ।
प्रथमतः संविधानको हत्या गर्नका लागि त्यो गर्भावस्थामा भएको बेलामा नै आक्रमण गरिएको थियो । जुन बेला संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्ने काम गरिरहेको थियो, त्यो बेला नै भारतले त्यसको निर्माण रोक्नका लागि दबाब दिएको थियो । त्यसको निर्माण भइसकेपछि पनि त्यसलाई जारी गर्न नदिनका लागि जोड दिएको थियो । तर त्यसका बाबजुद संविधानको जन्म भयो ।
संविधान जारी भएपछि भारतले त्यसमा संशोधनको लागि दबाब दिएको थियो । आफूले भनेजस्तो संशोधन नगरेको हुनाले त्यसले अहिलेसम्म त्यो संविधानलाई स्वागत गरेको छैन । त्यो संविधान निर्माण गरेपछि मधेसवादीहरूले त्यसलाई जलाएका थिए । अहिले पनि उनीहरूले संविधानमाथि हमला गरिरहेका छन् ।
राजावादीहरूले सुरुदेखि नै गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनःस्थापना र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउनका लागि अभियान चलाउँदै आइरहेका छन् । उनीहरूले संविधानको पुनर्लेखनको माग गरिरहेका छन् ।
कतिपय वामपन्थीहरूले पनि वर्तमान संविधान र गणतन्त्रलाई समेत प्रतिक्रियावादी बताएर तिनीहरूलाई खारेज गर्नका लागि आवाज उठाइरहेका छन् । उनीहरूको जोड यो कुरामा छ कि वर्तमान संविधान वा गणतन्त्रलाई समाप्त गरेर नयाँ जनवादी गणतन्त्र कायम गर्नुपर्छ । त्यो विचार क्रान्तिकारी हो, तर तात्कालिक परिस्थितिमा त्यो नीतिले नयाँ जनवादी गणतन्त्रको स्थापनामा मद्दत पुग्दैन, विद्यमान संविधान र गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने प्रतिगामी शक्तिको उद्देश्यमा नै मद्दत पुग्ने छ ।
हामीले पनि विद्यमान संविधान र गणतन्त्रप्रति विरोध राख्दछौँ । किनभने वर्तमान संविधान र गणतन्त्र दुबै अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक व्यवस्थाअन्तर्गतका कुरा हुन्; र, तिनीहरूलाई समाप्त गरेर नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम गर्ने आजको हाम्रो आधारभूत लक्ष्य हो ।
त्योबाहेक संविधानमा उल्लेखित सङ्घीयतासित पनि हाम्रो गम्भीर मतभेद छ ।
विद्यमान संविधान र गणतन्त्रप्रति हाम्रो विरोध भए पनि तात्कालिक अवस्थामा हामीले तिनीहरूको रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।
आजको अवस्थामा ती दुबैको ऐतिहासिक र प्रगतिशील महत्त्व छ । ती दुबैलाई समाप्त गर्नका लागि सङ्घर्ष गर्नुको अर्थ तिनीहरूका विरुद्धको भारतीय साम्राज्यवाद, राजावादी र मधेसवादीसमेतको प्रतिगामी नीतिको सेवा गर्नु हुने छ ।
विद्यमान संविधान, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको लागि सबैभन्दा ठुलो खतरा ओली सरकारबाट नै छ । ओली सरकारले पहिले पनि आफ्ना गलत नीति र कार्यशैलीबाट संविधान, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतासमेतको आधार कमजोर पार्ने काम गरिरहेको थियो । अहिले संसद विघटन गरेर त्यसले संविधानलाई नै मृत्युको मुखमा धकेल्ने काम गरेको छ । त्यसको त्यो कार्यबाट संविधानमाथि मात्र होइन, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, राष्ट्रियतासमेतमाथि कुठाराघात पुग्ने खतरा पैदा भएको छ ।
अहिले संविधान मृत्युको मुखमा उभिएको छ, तर त्यसको अर्थ त्यसको मृत्यु नै भइसक्यो भन्ने होइन । त्यो (संविधान) जीवन र मृत्युको दोसाँधमा छ । अन्तमा त्यसको अकाल मृत्यु हुने छ वा त्यो जीवित र पुनः शक्तिशाली हुने छ ? त्यो कुरा जनताको चेतना र आन्दोलन कति उठ्ने छ ? त्यसमाथि निर्भर गर्ने छ ।
इतिहासमा सधँै प्रतिगमनका विरुद्ध अग्रगमनको विजय हुँदै आएको छ । त्यसकारण अहिले पनि जनताको शक्तिको अगाडि प्रतिगमनको पराजय हुने छ भन्ने कुरामाथि हामीलाई पूर्ण विश्वास छ ।
अघिल्लो लेखमानेपालमा बुधबारदेखि कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान सुरु गरिने
अर्को लेखमादुईतिहाइका लागि चुनावमा जाने, आएन भने…?